Iyaheha iHonda WR-V
Fanelesibonge Bengu | April 23, 2021
KWAHONDA Motor Southern Africa unyaka odlule bawuvale ngokwethula isport utility vehicle (SUV) encane iWR-V.
Yinto eyaziwayo ukuthi isigaba samaSUV amancane sikhula ngamandla eNingizimu Afrika, nasemazweni amaningi omhlaba. IWR-V iqoqekile yabe isithi ukushiya igabade ngo-173mm. Inechrome ngaphambili kwigrille, isezibanjeni zezicabha nangemuva ebhuthini.
Amalambu (headlights) ayiLED futhi kunamafog lamp ngezansi. Ngaphandle kwamaroof rails okhakhayini kodwa ukuba yiSUV kwayo kuphinde kugqanyiswe ukuqumba emakhwapheni amasondo, lapho kunekhava emnyama egudla umzimba wonke wayo.
Ubuncane bayo bungakwedusa uzitshele ukuthi nangaphakathi ithothene kanti, phinde. Izokumangaza indlela evuleke ngayo ngisho nabagibeli bangemuva ngeke ubezwe bekhala ngokumpintsheka becela abangaphambili ukuthi baqhelise izihlalo zabo.
Isikhala ebhuthini lapho kunesondo khona eliyisipele elingu-16 inch njengawo wonke amanye, singu-363 wamalitha kanti uma ulalise izihlalo siba ngu-881 wamalitha.
Iqinile kwidashboard futhi alukho uxhaxha lwamabhathini. Kune-touchscreen infotainment system engu-7 inch nokuyilapho kudlala umsakazo, ukwazi ukubona ngemuva uma uhlehla ngoba inekhamera, kanti uyakwazi ukuxhuma iselula nge-Apple CarPlay/Android Auto nokunye.
Ezinye izinto enazo yicruise control, amawindi kagesi, idunyiswa ngebhathini, automatic aircon nokunye. Injini ehamba ngayo ingu-1.2 litre eyifour-cylinder kaphethroli engenayo iturbo. Inamandla angu-66kW netorque engu-110Nm nogearbox oyi-5 speed oshintshwayo.
Yifake emgwaqweni, iyawenza umsebenzi! Uzwa umsindo omncane womoya kanjalo nowenjini ikakhulu uma unyuka imiqansa, sewehlisa amagiya. Ngakuphethroli abakwaHonda bathi idla amalitha angu-6.4 kodwa kimi ibidla angaphezu kancane kuka-8.
Ngakwezokuphepha inama-airbag ayisithupha, indawo yokufaka isihlalo sengane, amabhreki e-ABS ne-EBD.
IWR-V yize ibanga abathengi nezimoto esezizakhele igama kulesi sigaba okubalwa kuzo iVW T-Cross, Ford EcoSport, Hyundai Venue nezinye kodwa nayo idinga ukunakwa ikakhulu ngoba ungathembela kwizimoto zakwaHonda, kwazise zineminyaka zikhona.
WR-V 1.2 Elegance MTR327 300
Ifika neservice plan yeminyaka eyisithupha noma u-60 000 lm, warranty yeminyaka emihlanu noma u-200 000km ne-AA Roadside Assistance yeminyaka emithathu.